အသင်းရဲ့မေ့ထားလို့မရတဲ့ တိုက်စစ်မှုးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် ဝီးတော့ဒ် – Gunners' Side
Arsenal's Robert Pires (far left) celebrates with team-mates (from left-right) Ashley Cole, Thierry Henry and Sylvain Wiltord after scoring the second goal against Bolton Wanderers during the Barclaycard Premiership game at the Reebok Stadium, Bolton, Saturday April 26, 2003. PA Photo: Martin Rickett THIS PICTURE CAN ONLY BE USED WITHIN THE CONTEXT OF AN EDITORIAL FEATURE. NO WEBSITE/INTERNET USE UNLESS SITE IS REGISTERED WITH FOOTBALL ASSOCIATION PREMIER LEAGUE.
ကျွန်တော်တို့က အသင်းရဲ့ ဂန္တဝင်တွေအကြောင်းပြန်ရေးရင် အွန်နရီ ၊ ဘားကင့်​၊ အနယ်ကာတို့အကြောင်းပြောတယ်။ မအောင်မြင်တဲ့သူဆိုရင်ကျတော့ ချာမက် ၊ ဂျက်ဖား၊ ဘန်တနာတို့အကြောင်းပြောတယ်။ ကြားထဲမှာပျောက်နေသူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူကတော့ ဝီးတော့ဒ် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Invincible လဲဖြစ်တယ်။ အာဆင်နယ်နဲ့သာမက နိုင်ငံအသင်းနဲ့လဲအောင်မြင်သူ။ အွန်နရီရဲ့ ကစားဖော်ကောင်း။ ဒါပေမယ့် ဂန်းနားတွေအကြောင်းပြောရင် ဘာကြောင့် သူ့ကိုကျော်သွားကြလဲမသိဘူး။ ဒီတော့ Gunners’ Side ရဲ့ Player Profile ကော်လံအတွက် သူ့အကြောင်းလေးရေးပါမယ်ခင်ဗျ။
အာဆင်နယ်မှာ ၄ ရာသီကစားခဲ့တယ်။ ၁၇၅ ပွဲမှာ ၄၉ ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်။ ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တင်အသင်းရဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်အာဆင်နယ်အသင်းကလွဲရင် ပြင်သစ်မြေက အသင်းတွေမှာပဲအချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့သူဖြစ်တယ်။ ဒီပို့တီဗိုအသင်းနဲ့ မှတ်တမ်းရှိပေမယ့် တစ်ပွဲမှမကစားခဲ့ဘူး။ ပြန်ပြီးအငှားချတာနဲ့တင် ဇာတ်လမ်းဆုံးခဲ့တယ်။ ဘောဒိုးအသင်းနဲ့အတူ ၁၃၆ ပွဲကစား ၊ ဂိုးပေါင်း ၆၀ သွင်းယူပြီးတဲ့နောက်မှာ အာဆင်နယ်အသင်းကိုရောက်တယ်။ အသင်းရဲ့ စံချိန်တင်ကြေး ပေါင် ၁၃ သန်းနဲ့။ အတိအကျပြောရရင် ယူရို ၂၀၀၀ မှာ ပြင်သစ်အသင်းကို အသက်ဆက်စေခဲ့တဲ့ ချေပဂိုးသွင်းယူပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ထာဝရအကောင်းဆုံးကစားသမား ယောက် ၅၀ မှာ နံပါတ် ၃၃ ချိန်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်ပရိတ်သတ်တွေ မေ့ထားဖို့မသင့်တဲ့သူဖြစ်ပါတဘ်။
အစောပိုင်းအချိန်တွေမှာ သူက အနိမ့်တန်းလိဂ်အသင်း ဂျိုင်းဗယ်လီမှာကစားခဲ့တယ်။ ထိုစဥ်က ၁၉၉၁ ခုနှစ်။ ရင်းနက်စ်အသင်းနဲ့အတူ ဘောလုံးလောကကို ထဲထဲဝင်ဝင်ရောက်လာတော့ ၁၉၉၃-၉၄ ဘောလုံးရာသီ။ အဲ့ဒီနှစ်မှာ ၂၆ ပွဲကစားပြီး ၈ ဂိုးသွင်းပေးခဲ့တယ်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်နွေရာသီမှာတော့ ဝီးတော့ဒ်က အိုလံပစ်အသင်းနဲ့အတူ ထွန်းတောက်လာတယ်။ ရင်းနက်စ်ကစားသမားလေးက ဒီပို့တီပိုကိုရောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ပြန်အငှားချတယ်။ ပြီးတော့ စပိန်ကိုပြန်ရောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ချက်ခြင်းပဲပြင်သစ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ အဲ့ဒီနောက်တော့ အာဆင်နယ်ကိုရောက်လာတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပို့တီပိုအသင်းဟာ နာမည်မှတ်တမ်းသာရှိပြီး မကစားဖြစ်ခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်တယ်။ ရင်းနက်စ်နဲ့ ဘောဒိုးအသင်းတွေအတွက် ဂိုးပေါင်း ၁၀၀ နီးပါးသွင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်။
သူကတကယ့် Finisher ကောင်းတစ်ယောက်။ ဧရိယာထဲမှာ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဘောလုံးထိထိဂိုးတာများတယ်။ ယူနိုက်တက်နောက်တန်းကို ဖရိုဖရဲဖြစ်စေတဲ့ FA ဖလားပွဲက ဂိုးကလည်းအမှတ်တရဖြစ်ပါတယ်။ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တိုက်စစ်မှုးတစ်ယောက်ပေါ့။ အွန်နရီတို့တွေအတွက် အကောင်းဆုံးသောအရံလူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။
အာဆင်နယ်နဲ့ ၄ ရာသီပြီးတော့ပြင်သစ်ပြန်။ လိုင်ယွန်နဲ့အပါအဝင်အသင်းဟောင်းရင်းနက်စ်အတွက်လဲကစားသေးတယ်။ ပြင်သစ်မှာနှစ်များစွာကျင်လည်ပြီး ၂၀၁၁-၁၂ ဘောလုံးရာသီမှာတော့ အနားယူသွားခဲ့တယ်။ ကစားသမားဘဝမှာ ပွဲပေါင်း ၇၀၀ ဝန်းကျင်ကစားခဲ့ပြီး ဂိုး ၂၀၀ ကျော်သွင်းယူခဲ့တယ်။ နိုင်ငံနဲ့ရော ကလပ်နဲ့ပါအောင်မြင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။
သူ့ရဲ့ အာဆင်နယ်ကစားသမားဘဝက ဂန္တဝင်တွေကြားထဲမှာ နစ်မြှပ်နေသလိုရှိပေမယ့် တကယ်တန်းမှာ အွန်နရီ ဘားကင့် တို့ပြီးရင် ခြေစွမ်းအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုးတစ်ဦး လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ အကောင်းဆုံးကစားသမား ၅၀ ထဲမှာ ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။